Omena an-dRatsirahonana sa ny tafika ? – MyDago.com aime Madagascar
Omena an-dRatsirahonana sa ny tafika ?
Io indray i Boay kely ! Andro vitsy tsy hahatongavan’ilay daty malaza hialan’ingahy Andry Rajoelina eo amin’ny fahefana, dia mandeha avokoa ny resaka izay olona mety hamindrany ny fahefana feno
aorian’ilay 24 mey ho avy izao. Isan’ny anarana mandeha any ny an’ingahy Ratsirahonana izay mpanolo- tsaina mahatoky an’ingahy Rajoelina. Io no olona azony antoka fa afaka hiaro azy amin’ny
tranga izay mety hiseho rehetra, araka ny feo mandeha ihany. Etsy ankilany ihany koa, dia voaresaka matetika ny momba ny tafika. Na dia efa nanambara aza ireo lohany ao amin’ity tandroka aron’ny
vozona ity, fa tsy manao politika, dia tsy voafefy kosa ny feo mandeha ny mety hampitan’i zandry kely ny faneva any amin’izy ireo. Raha ho tanteraka tokoa izany, dia voadingana izany ny
Praiminisitra lehiben’ny governemanta, izay efa miandry mahazo fotsiny amin’izao fotoana izao. Raha ny tsilian-tsofina mandeha ihany, dia toa be fanahiana ihany ny ao andapa amin’izao fahefana
hilaozany izao, satria roa volana be izao ianao dia hitovy amin-dRakoto sy Rabe, ary Rasoa eny an-dalana rehetra eny, izay olona efa zatra nibodo fahefana tao anatin’izay efa-taona izay. Ny ora
iray anefa eto amintsika, dia vidian-dafo, satria firenena tsy milamina isika, ka ao anatin’ny indray mipi-maso, dia miova daholo ny zava-drehetra. Tahaka izay ihany tsy nilatsaka, dia mbola
nitondra roa na telo volana manaraka e? Ny kandida vehivavy mpifaninana ity, toa matanjaka ihany, ary sarotra ny mety handresena azy. Dia efa mahaiza mionona dieny izao, fa toerana
hifandimbiasana io e.
2 réflexions sur « Omena an-dRatsirahonana sa ny tafika ? »
Tsy hatao manaitra ny tranga-javatra hataon’i zandry kely! Na mangery am-pataloha eo am-pikabariana aza i Boy kely dia tsy maha-menatra azy velively; izany no maha zandry kely azy!
Mbola tsy miaiky ny loham-poza ve nareo e!
Efa hoe, entin´i Boaikely amin´ny sangantsika isika malagasy,izay tiany atao na dia mandika lalána aza dia mety avokoa . Tsy misy mahasahy mikasika azy, sy mahasahy mitraotra ,fa toa jerem-potsiny tahaka ny tany nilavoana i boaikely. Aiza izy no tsy manararaotra, sa hivavahany any israely sy vatikan isika dia malemy daholo. Na ny firenena vahina aza toa mijery maina fotsiny ihany.
Ny tiako lazaina dia . jereo fa mbola tsy hi-démission izany i boaikely fozalahy io, ary mbola hampiasa ny fitaovam-pnajakana sy ny volam-bahoaka hanaovany propagandy ary mbola hangalam-bato ihany koa.
Tsy misy irarahiana izay lal´na sy izay vavan´olona himenomenona aminy fa sady efa be marenina no efa maty eritreritra ny anao lahy.
tsy hiala hono ny minisitra kandidá raha tsy miala rajoelina, dia vao maika faly i rajoelina hoe. samy miara-mijanona amin´ny toerany dia mitohy na tantara mandroso ny zavatra hatao fa tsy misy mahasakana azy eo.
Rajoelina = Foza = jiolahim-boto= mpamono olona = Mpampahantra ny vahoaka Malagasy
Précédent Article précédent : Goaka ny atiny
Suivant Article suivant : Hiditra amin’ny dingana famaranana